မေးခှနျးများဖွဆေိုခွငျး | Answering Questions | Real Conversion
တရားဒသေနာတော်ကို လော့ဈအိနျဂယျြလျရှိ Baptist Tabernacle အသငျးတော်၌ ၂၀၂ဝခုနှဈ အောကျတိုဘာလ (၄) ရကျ၊ သခငျဘုရား၏နေ့ ညနပေိုငျးတှငျ ဝါရင့်သငျးအုပျဆရာ
Dr. R. L. Hymers, Jr. က ဟောပွောသညျ။
A lesson given by Dr. R. L. Hymers, Jr.
(၁၇၀၇-၁၇၈၈ခုနှဈ ချာလကျ(ဈ)ဝီစလီသီကုံးသော) နှုတျတဈထောငျဖွငျ့ သီဆို ကျူး ဓမ်မသီခငျြးကို တရားဒသေနာတော် မတိုငျမီ သီဆိုသညျ။
သင့်ကိုတဈစုံတဈယောကျက မေးခှနျးတဈခုမေးခဲ့မယျဆိုရငျ သငျစိတျအနှောင့်အယှကျ ဖွဈမလား? မဖွဈရပါ။ တမနျတော် ပတေရုက၊
“စိတျနှလုံးထဲ၌ ထာဝရအရှငျဘုရားသခငျကို ရိုသခွေငျးရှိကွလော့။ သငျတို့မွော် လငျ့ခွငျး၏ အကွောငျးကို မေးမွနျးသောသူရှိသမျှတို့အား၊ နူးညံ့သောသဘော၊ ကွောကျရှံ့သောသဘောနှငျ့ ပွနျပွော ခွငျးငှါ၊ ကာလအစဉျမပွတျ အသငျ့ရှိနကွေ လော့။” ၁ပေ ၃:၁၅
၁။ ကျွနျုပျသမ်မာကမျြးစာကို မယုံဘူး
တမနျတော်ပေါလုက သမ်မာကမျြးစာကို မယုံကွညျသောဟလေသလူများကို ကိုးကားခဲ့သညျ။ ပေါလုသညျ သူသကျသခေံသောသူတို့ကို စညျးရုံးသိမျးသှငျးရနျ မကွိုးစားခဲ့ပါ။ ကျွနျုပျတို့၏ အဓိကလုပျဆောငျ ခကျြကို သကျသခေံခွငျးမှာ ကွညောထုတျဖော်ခွငျးဖွဈသညျ၊ ကာကှယျခွငျးမဟုတျပါ။
သမ်မာကမျြးစာ၏အဓိက ဝငေှခကျြမှာ လူတဈဦးထာဝရအသကျရရနျဖွဈသညျ။ ထာဝရအသကျကို ထိုသူက မယုံဘူးလို့ပွောရငျ “ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး ကမျြးစာဘာပွောတာလဲ၊ ဒီကိစ်စအပေါ်မှာ သမ်မာကမျြးစာ ရဲ့သှနျသငျခွငျးနှင့်ပါတျသတျ၍ သငျဘယျလိုနားလညျလဲ?” ဟု ပွောနိုငျသညျ။
ထိုအချိနျက ၉၈ ရာခိုငျနှုနျးခန့်ရှိသောသူတို့သညျ “ပညတျတော် ဆယျပါး စောင့်ရှောကျခွငျးအားဖွင့် ၎င်းငျး၊ ခရဈတော်၏ပုံသကျသကေို အတုယူခွငျးအားဖွင့်” ဟုပွောလိမ့်မညျ။ နောကျပွီး “ထိုအရာက ငါကွောကျ တဲ့အရာ”ဟု သငျပွောနိုငျသညျ။ သငျသမ်မာကမျြးစာ၏အဓိကဆိုလိုရငျးကို နားမလညျဘဲ ငွငျးပယျခဲ့ပွီ။ အကွောငျးမှာ သင့်အဖွက မှားယုံသာမက၊ သမ်မာကမျြးစာနဲ့ဆန့်ကငျြဘကျဖွဈနလေို့ပါ။ အသိဉာဏျရဲ့တုန့် ပွနျမှုက ဤအကွောငျးအရာနှင့်ပတျသကျ၍ သမ်မာကမျြးစာသှနျသငျခကျြကို ကျွနျုပျအားမျှဝရေနျဖွဈသညျဟု ယခု သငျမထငျပါလား?။ လကျခံမလား?၊ ငွငျးပယျမလား? ဆုံးဖွတျခကျြတဈခုခုကို သငျပွုလုပျနိုငျပါသညျ။”
ယခု သခငျယရေှုနှင့်ပတျသကျသောဟောကိနျး ၁၀ ခကျြကို ကျွနျုပျဖတျပါမညျ။
“အကျွနျုပျစားစရာဘို့ ဆေးခါးကိုကျွေးကွပါ၏။ ရငေတျသောအခါပုံးရညျကို တိုကျ ကွပါ၏။” (ဆာလံ ၆၉:၂၁)
“သို့သော်လညျး၊ ထိုသူသညျ ငါတို့အနာရောဂါ ဝဒေနာများကို ယူတငျဆောငျရှကျ လ၏ေ။ ဒဏျခတျ တော်မူခွငျးကို၎င်းငျး၊ ဘုရားသခငျဆုံးမ၍ နှိမျ့ခတြော်မူ ခွငျးကို၎င်းငျး ခံရသောသူဖွဈသညျဟု ငါတို့သညျ ထငျမှတျကွပွီ။ ထိုသူသညျ ငါတို့လှနျကျူးခွငျး အပွဈများကွောငျ့၊ နာကငျြစှာထိုးခွငျး၊ နှိပျစကျခွငျးကို ခံရလ၏ေ။ . . . ထာဝရဘုရားသညျ ခပျသိမျးသောငါတို့၏အပွဈများကို သူ့အပေါ်၌ တငျတော်မူ၏။” (ဟရေှာယ ၅၃း၄-၆)
“ထိုအခါ မကျြစိကနျးသောသူတို့သညျ မကျြစိပှငျ့ လငျးကွလိမျ့မညျ။ နားပငျးသော သူတို့သညျ နားပငျးခွငျး နှငျ့ လှတျကွလိမျ့မညျ။” ဟရေှာယ ၃၅း၅
“အကယျစငျစဈငါယုံ၍၊ ငါ့မုနျ့ကိုစားသော အဆှခေငျပှနျးသညျ ငါ့ကိုခွနေှငျ့ကျောကျ သတညျး။” ဆာလံ ၄၁း၉
“တဖနျ ငါက၊ ငါရထိုကျသောအခကို ပေးအံ့သောငှါ၊ သငျတို့သညျ အလိုရှိလျှငျ ပေးကွလော့။ အလိုမရှိလျှငျ မပေးကွနှငျ့ဟုဆိုသော်၊ သူတို့သညျ ငါ့အားအခ ပေးအံ့သောငှါ ငှသေုံးဆယျကို ချိနျကွ၏။ ဇာခရိ ၁၁း၁၃
(၆)တံတှေးထှေးခွငျးနှင့် ကျာပှတျဖွင့် ရိုကျနှကျခွငျး
“ရိုကျသော သူတို့အား ငါ့ကျောကို၎င်းငျး၊ နားပနျး ဆံကို နှုတျသောသူတို့အား၊ ငါ့ပါးကို၎င်းငျး ငါအပျ၏။ အရှကျခှဲခွငျးနှငျ့ တံထှေးထှေးခွငျးမှ ငါသညျ ကိုယျမကျြ နှာကိုမလှှဲ။” ဟရေှာယ ၅၀း၆
( ၇) လကျဝါးကပျတိုငျ၌ ရိုကျနှကျခံရသညျ။
“ခှေးတို့သညျ အကျွနျုပျကိုဝိုငျးလကျြ၊ စုဝေးသော လူဆိုးတို့သညျ ဝနျးရံလကျြန၍ေ၊ အကျွနျုပျ၏ ခွလေကျ တို့ကို ထိုးဖောကျကွပါပွီ။” ဆာလံ ၂၂း၁၆
“ကျွနျုပျဘုရား၊ အကျွနျုပျဘုရား၊ အဘယျကွောငျ့ အကျွနျုပျကို စှနျ့ပဈတော်မူသ နညျး။” ဆာလံ ၂၂း၁
“ကိုယျတော်၏ သနျ့ရှငျးသော သူအားလညျး ပုပျစပျခွငျးကို ရှိစတေော်မမူဘဲ လကျြ၊” ဆာလံ ၁၆း၁၀
“ငါထောကျမသော ငါ့ကျွနျရငျး၊ . . . သူသညျ လူအမျိုးမျိုးတို့ကို တရားပေး လိမျ့မညျ။” ဟရေှာယ ၄၂း၁
အထကျပါဖော်ပွခကျြသညျ ယရေှုနှင့်ပတျသကျသောပရောဖကျပွုခကျြ ၁ဝခု ဖွဈသညျ။ သမ်မာကမျြးစာတှငျ ပွည့်စုံ ခဲ့ပွီးဖွဈသော ပရောဖကျပွုခကျြပေါငျး နှဈထောငျကျော်ရှိသညျ။
လှနျခဲ့သောနှဈအနညျးငယျတှငျ National Enquirer မဂ်ဂဇငျးက ခတျေသဈ “ ပရောဖကျ များ” ကို ဦးဆောငျခွငျးဖွင့် ပရောဖကျပွုခကျြ ၆၁ ခုကို ဖော်ပွထားသညျ။ ထိုပရောဖကျပွုခကျြ ၆၁ခုသညျ ထို နှဈ၏နောကျဆုံးခွောကျလအတှငျး ဖွဈပကျြလိမ့်မညျဟုဆိုသညျ။ သူတို့က ပုပျရဟနျးမငျးကွီးပေါလုသညျ အနားယူမညျဖွဈပွီး ရိုမနျကကျသလဈဘုရားရှိခိုးကျောငျးသညျ ဘာသာရေးကိုငျးရှိုငျးသောကော်မတီတဈခုမှ လှှဲပွောငျးယူလိမ့်မညျဟုဆိုသညျ။ ဂျော့ချျ ဖောမနျသညျ သူ၏ဟဲဗီးဝိတျသရဖူကို အာဖရိကရှိ မိုဟာမကျအလီ နှင့်အတူ ရငျဆိုငျရနျ၊ နှင့် Ted Kennedy သညျ သမ်မတရှေးကောကျပှဲအတှကျ မဲဆှယျစညျးရုံးမှု ပွုမညျဖွဈ သညျဟု ပွောသညျ။ မကျြမှောကျ ခတျေပရောဖကျပွုခကျြများနှင့် သမ်မာကမျြးစာမှ ပရောဖကျပွုခကျြများ၏ တဈခုတညျးသောကှာခွားခကျြမှာ ခတျေသဈ“ ပရောဖကျပွုခကျြများ” သညျ အမွဲတမျးမှားယှငျးနပွေီး၊ သမ်မာ ကမျြးစာမှ ပရောဖကျပွုခကျြများမှာ အမွဲတမျးမှနျကနျသညျ။
၂။ ဆင့်ကဲဖွဈစဉျသညျ ဖနျဆငျးခွငျးကို သကျသပွေသညျမဟုတျလား?
Dr. A. W. Tozer က “သမ်မာကမျြးစာကို ယုံကွညျသောသူများသညျ စင်ျကွာဝဌာ က ဘုရားသခငျ၏ ဖနျဆငျးခွငျးတဈခု ဖွဈသညျဟု ယုံကွညျသညျ၊ ဒီအရာက အစရှိလို့ ထာဝရမဟုတျပါ။ ဒီအရာက မတော်တဆတှေ့ရှိမှု တဈခုနှင့်တဈခုအကွား မတော်တဆတှေ့ရှိခဲ့ရသည့် တိုကျဆိုငျမှု များဆကျ တိုကျဖွဈပှားခွငျး၏ ရလဒျမဟုတျပါ၊ ၎င်းငျးကိုယုံကွညျရနျ လူအနညျးငယျသာရှိသည့် ယုံလှယျမှုလိုအပျသညျ”
လူငယျတဈဦးက “ ဆင့်ကဲဖွဈစဉျအယူဝါဒ မှနျတယျဆိုတာ ဘယျအရာက သင့်ကို သကျသပွေတာ လဲ?” ဟုမေးခဲ့သညျ။ သူက တိရိစ်ဆာနျများနှင့်လူများအကွား တူညီမှုက ဆငျးကဲဖွဈစဉျကို သကျသပွေတယျ” ဟု ပွနျဖွခေဲ့သညျ။
လှနျခဲ့သော ၁၉၅ဝခုနှဈတှငျ James Watson နှင့် Francis Crick တို့သညျ အသကျ၏ အဓိကသော့ခကျြ မော်လီကျူးကို ရှာဖှတှေေ့ရှိခဲ့သညျ။ ထိုရှာဖှမေှုအားဖွင့် သူတို့သညျ နိုဘဆေုချီးမွှင့်ခဲ့ရသညျ။ လူ့ကိုယျခန်ဓာတှငျ DNA ပေါငျး ထရီလီယံထရီလီယံကျော် ရှိသညျ။ ၎င်းငျးသညျ မယုံနိုငျလောကျအောငျ ရှုပျထှေးသောအရာဖွဈသညျ။
ဘုရားသခငျမဲ့ဝါဒီတဈဦးနှင့် ဆင့်ကဲဝါဒီတဈဦးဖွဈသောခရဈသညျ နှဈပေါငျး ၄.၆ ဘီလီယံကျော် ကာလအတှငျး အလိုအလျောကျပေါ်ထှကျလာသော DNA မော်လီကျူးဖွဈနိုငျခွကေို ကမ်ဘာမွကွေီးသကျရှိ များဟု ရှာဖှရေနျသူဆုံးဖွတျခဲ့သညျ။ ကမ်ဘာ့သမိုငျးတှငျ ဆဲလျတဈခု၏ DNA မော်လီကျူး၏အခှင့်အလမျးများက ဘာတှလေဲ။ သူ၏နိဂုံးကို သငျသိပါသလား? သုညသာဖွဈသညျ။ နှဈပေါငျး ၄.၆ ဘီလီယံအတှငျး၌ပငျ ထို အရာသညျ ဖွဈပကျြနိုငျသည့် အခွအေနမေရှိပါခဲ့!
အဆုံးမှာ ဖရန့်စဈခရဈက ဤအရာကို ဘုရားသခငျလုပျခဲ့သညျဟု ပွောခဲ့သလား? မပွောခဲ့ပါ။
ဤအထောကျအထားကို လကျခံရရှိတဲ့ဒီသိပ်ပံပညာရှငျများသညျ မိမိတို့သီအိုရီသညျ အမှားဖွဈသညျဟု မဝနျခံခွငျးက ထူးခွားသလိုခံစားရလာ? သူတို့သညျ “Darwin ပွီးနောကျ ငါတို့က မမှနျကနျတဲ့အရာများ သငျကွားပေးခဲ့တယျ၊ အမိုငျနိုအကျဆဈများစုစညျးပွီး ဆဲလျတဈခုဖွဈပေါ်လာသညျနှင့်အမျှ လူ့ရဲ့ဘဝစတငျ ခဲ့တယျ၊ တဆင့်ပွီးတဈဆင့် အနှဈတဈဘီလီယံပွီးနောကျ အခုကျွနျတော်တို့ တညျရှိလာတယျလို့ ထငျခဲ့တယျ၊ ခငျဗျား တို့ကို မှားယှငျးစှာ သငျကွားပေးခဲ့လို့ တောငျးပနျပါတယျ”ဟု တဈယောကျကမှ မပွောခဲ့ပါ။
ဖရန့်စဈခရဈ ဘာတှလေုပျခဲ့လဲဆိုတာ သငျသိပါသလား? ဖွဈနိုငျချပေငျ မရှိတဲ့ သီအိုရီကို သူသယျဆောငျလာခဲ့တာပါ။ သူ၏သီအိုရီအသဈအရ ဝေးလံသောကမ်ဘာဂွိုဟျပေါ်ရှိ ရှေ့ခတျေမျိုးနှယျစုသညျ သူတို့၏သုကျပိုးများနှင့်အတူ အာကာသယာဉျများကို လှှတျတငျပွီးဂွိုလျအမျိုးမျိုး၌ မျိုးစေ့ခပြေးခဲ့ပွီး ထိုနရောမှ တဆင့် ကျွနျတော်တို့ ဖွဈပှားလာသညျဟု ဆိုသညျ။ Star Wars နဲ့ဆငျတူသလိုပငျ ဖွဈသညျ!
လူ့ဘဝက သကျရှိမထငျရှားသောအရာမှ ဆငျးသကျနိုငျစရာအကွောငျးမရှိပါ။ သမ်မာကမျြးစာက “အစအဦး၌ ဘုရားသခငျသညျ ကောငျးကငျနှငျ့ မွကွေီးကို ဖနျဆငျးတော်မူ၏။” (ကမ်မာဦးကမျြး ၁း၁)
ဘုရားသခငျ၏တညျရှိခွငျးကို ယုံကွညျစသေော သကျသအေထောကျအထား (၃)ခု၊
အကွောငျးမှာ မကျြမွငျမရသောထာဝရဘုရားသခငျကို ယုံကွညျရနျ ဤစင်ျကွာဝဌာ ၌မွငျတှေ့ရသည့် အကွောငျးတရားနှင့်အကျိုးတရားက ကျွနျုပျကိုညှနျပွသညျ။
အကယျ၍ သငျသညျအင်ျဂါဂွိုဟျသို့သှားပွီး ကောငျးမှနျစှာဒီဇိုငျး ဆငျထားသော နာရီကို တှေ့ရှိပါက ထိုနာရီသညျ ပွုလုပျသူတဈစုံတဈယောကျရှိကွောငျးကို ညှနျပွ သညျ။ ဒါကွောင့် ဤလှပပွီး ဒီဇိုငျးဆှဲထားတဲ့ကမ်ဘာက ဒီဇိုငျနာဖွဈတဲ့သူတဈယောကျကို ညှနျပွသညျ။ ထိုသူသညျ ဘုရားသခငျဖွဈသညျ။
ကျော်ကွားလှသောမိုနာလီဆာပနျးချီကားကိုကွညျ့ပါ။ ကိုယျရညျကိုယျသှေး၏ အထောကျ အထားများကို ကျွနု်ပျတို့မွငျနိငျပါသညျ။ အဆိုပါပနျးချီကားသညျ ပုဂ်ဂိုလျရေးရာ မပါသော ပနျးချီကားရလဒျမဖွဈနိုငျပါ။ တတိယအထောကျအထားကအရေးကွီးသညျ၊ အဘယျ့ကွောငျ့ ဆိုသော်၊ အကွောငျးကိစ်စတဈခု သို့မဟုတျ တှနျးအားတဈခုက ငါတို့ကိုတာဝနျခံမှာ မဟုတျဘူး။ သို့သော် လူတဈဦးက ကျွနျုပျတို့၏အပွဈများအတှကျတာိနျခံကိုငျတှယျပေးပါလိမျ့မညျ။
၃။ ကျွနျတော်ကိုးကှယျသည့်ဘုရားသညျ ထိုကဲ့သို့မဟုတျပါ။
မကျသဒဈအသငျးတော်ကို စတငျတညျထောငျခဲ့သည့် ဂျွနျဝီစလီလျသညျ ကယျတငျခွငျးအတှကျ ယရေှုခရဈကိုယုံကွညျကိုးစားခွငျး၏အရေးပါမှုကို ရှငျးလငျးစှာဖော်ပွထားသညျ။ သူသညျ Oxford Seminary တှငျ ငါးနှဈကွာခဲ့ပွီးနောကျ အင်ျဂလနျချာ့အသငျးတော်၏ ဝနျကွီးဖွဈလာသညျ။ ထိုနရောတှငျ သူသညျ ဆယျနှဈ ခန့်အမှုဆောငျခဲ့သညျ။ ထိုအချိနျအကုနျပိုငျး ၁၇၃၅ ခန့်တှငျအင်ျဂလနျမှ ဂျော်ဂျီယာသို့ သာသနာပွုဖွဈလာခဲ့ သညျ။
သူသညျ အမှုတော်လုပျငနျးထဲ၌ စိတျရငျးနဈပွီး‌လုပျဆောငျခဲ့သော်လညျး ကဆြုံးခွငျးများနှင့်ကွုံ တှေ့ခဲ့သညျ။ မနကျခငျး ၄နာရီတှငျ အိပျယာနိုးပွီး၊ ၂နာရီတိုငျတိုငျ ဆုတောငျးခဲ့သညျ။ အကဉျြးထောငျ၊ ဆေးရုံ များ၌ သှားရောကျမဝငေှခငျ ကမျြးစာဖတျရှုခွငျးအတှကျ အချိနျ (၁)နာရီခန့်ပေးသညျ။ သူတဈပါးကို ကူညီခွငျး၊ ဆုတောငျးပေးခွငျးဖွင့် နောကျကအြိပျယာဝငျလေ့ရှိသညျ။ မကျသဒဈအသငျးတော်နာမညျကို ဂျွနျဝီလီနှင့်သူငယျ များ၏ နညျးစနဈကဩော အသကျရှငျပုံများ စသည့်အသကျတာအားဖွင့် စတငျသညျ။
အမရေိကမှအပွနျခရီးတှငျ ကွီးမားသောမုနျတိုငျးတဈခုဖွဈပှားခဲ့ပွီး သူတို့စီးသည့်လှမေှာ နဈမွုပျနီး ပါးဖွဈခဲ့သညျ။ ကွီးမားသောလှိုငျးများသညျ သင်ျဘော၏ကုနျးပတျကိုရိုကျခတျပွီး လသေညျရှကျလှှင့် များကို ဖကျြစီးလသေညျ။ ဝီစလီက သူသရေတော့မညျဟု ကွောကျရှံ့နသေညျ။ သပွေီးနောကျပိုငျး ဘာတှဖွေဈပကျြ မလဲဆိုတာ သူမသိပါ၊ တာမလှနျအတှကျ ယုံကွညျစိတျခမြှုမရှိပါ။ အမှုတော်တှငျ အကောငျးဆုံး ကွိုးစား ခဲ့သော်လညျး သူ့အတှကျ သခွေငျးသညျ ကွီးမားသောကွောကျစရာမေးခှနျးဖွဈသညျ။
သဘငျေ်ာ၏အခွားတကျတှငျ လူတဈစုက ဓမ်မသီခငျြးသီဆိုနသေညျ။ ဝီစလီက “ခငျဗျားတို့ ဒီည သရေတော့မယ့်အချိနျမှာ ဘာဖွဈလို့သီခငျြးဆိုနိုငျသေးတာလဲ?ဟု မေးခဲ့သညျ။ သူတို့က “သဘငျေ်ာနဈသှားခဲ့ရငျ ငါတို့က ဘုရားသခငျနှင့်စိုးစံရနျ ကောငျးကငျဘုံတကျမယျ”ဟု ပွနျဖွသေညျ။
ထိုအချိနျ၌ ဝီစလီက ခေါငျးခါပွီး “သူတို့ဘယျလိုသိနိုငျတာလဲ၊ ငါထကျသူတို့ ဘာတှလေုပျဆောငျခဲ့ လုပျလဲ? နောကျပွီးသူက တဈပါးသူတို့ပွောငျးလဲဖို့အတှကျ ငါလာခဲ့တာ၊ ငါ့ကို ဘယျသူကပွောငျးလဲမလဲ”ဟု သူ့ကိုယျကို စဉျးစားခဲ့သညျ။
ဘုရားသခငျ၏ကူညီမစခွငျးအားဖွင့် သဘငျေ်ာသညျ Englandသို့ ရောကျရှိခဲ့သညျ။ ဝီစလီသညျ လနျဒနျမွို့သို့ပွီး ဘုရားကျောငျးအသှားလမျးတှငျ နှဈရာစုက ရေးသားခဲ့သော “ရောမဩဝါဒစာအတှကျ လုသာ ၏နိဒါနျး” တရားဒသေနာကို ဖတျရှုနသေည့် လူတဈယောကျ၏အသံကို သူကွားခဲ့သညျ။ ထိုတရားဒသေနာက စဈမှနျသောယုံကွညျခွငျးကို ဖော်ပွခဲ့သညျ။ ၎င်းငျးသညျ ကယျတငျခွငျးရရှိရနျ ယရေှုခရဈတော်တဈပါးတညျးကိုသာ ယုံကွညျရမညျ၊ မိမိ၏ကောငျးမှုကုသိုလျများအားဖွင့်မဟုတျပါ။
ဝီစလီက မိမိသညျ မှားယှငျးသောလမျးပေါ်သို့ရောကျနပွေီဟု ရုတျတရကျသတိပွုမိသညျ။ ထိုညတှငျ ဝီစလီက သူ၏မှတျတမျးထဲ၌ “ကိုးနှဈမတိုငျမီလေးပုံတပုံခန့်ကသူသညျ ခရဈတော်ကိုယုံကွညျခွငျးအားဖွင့် စိတျနှလုံးထဲ၌ ဘုရားသခငျ လုပျဆောငျပေးသောအပွောငျးအလဲကို ဖော်ပွနစေဉျ ကျွနျုပျ၏နှလုံးသားသညျ ထူးဆနျးစှာနှေးထှေးမှုခံစားခဲ့ရသညျ။ ခရဈတော်တဈပါးတညျးသာလျှငျ ကယျတငျခွငျးပသေညျ၊ ငါ့ရဲ့အပွဈများ အားလုံး ခရဈတော်က သယျဆောငျသှားပွီး၊ ထိုအပွဈတရားအောကျမှ ငါ့ကိုကယျတငျပေးခဲ့တယျ၊ ငါခရဈတော် ကို ယုံကွညျကိုးစားပွီ။” ဟုရေးသားခဲ့သညျ။
ထိုအရာက ကျွနျတော်တို့ကို ကယျတငျပေးသောယုံကွညျခွငျးဖွဈသညျ။ သူ၏အပွဈများအတှကျ နောငျတရပွီး ကယျတငျခွငျးရရှိရနျ ခရဈတော်ကို ယုံကွညျခဲ့သညျ။ ဝီစလီက ဒီညမတိုငျခငျမှာ ခရဈတော်ကို မယုံကွညျခဲ့ဘူးလားဟု သငျမေးနိုငျသညျ။ မှနျပါသညျ၊ သူမယုံကွညျခဲ့ပါ။ သူက ကမျြးစာကို အင်ျဂလိပျလို၊ လသငျ၊ ဂရိ၊ ဟဗွေဲလို လေ့လာနသေူတဈဦးဖွဈပါသညျ။ သူသညျခရဈတော်ကို ဤဘာသာစကားများဖွင့် ယုံကွညျသညျ။ သို့သော်သူသညျကယျတငျခွငျးအတှကျ John Wesley ကိုသာ ယုံကွညျခဲ့သညျ။
ထို့နောကျ သူသညျ ဆယ့်ရှဈရာစု၏ကွီးမားသောတရားဟောဆရာတဈယောကျ ဖွဈလာခဲ့သညျ။ သို့သော် ဤအရာသညျ ခရဈတော်ကို မိမိ၏သခငျနှင့်ကယျတငျပိုငျရှငျအဖွဈ ယုံကွညျကိုးစားခွငျးဖွင့် စတငျသညျ (ဒေါကျတာ.ဒီ.ဂျိမျး ဂငျနဒီ၊ ဧဝံဂလေိတရားပေါကျကှဲမှု၊ စတုတ်ထအကွိမျထုတျဝခွေငျး၊ Tyndale House ဖွန့်ချိရေးဌာန၊ ၁၉၉၆၊ စာမကျြနှာ ၁၈၃-၁၈၄) ။
ဗဒေငျပညာရပျသညျ အတှေးအခေါ်ပညာရပျ၏အစိတျအပိုငျးဖွဈသညျ။ ၎င်းငျးသညျ ကျွနျတော်တို့ ဘယျလို သိမလဲ? စသည့် မေးခှနျးနှင့်ဆကျစပျသညျ။ ဘုရားသခငျအကွောငျးနှင့်ပါတျသတျ၍ လူတှဖွေကွေား သည့် နညျးလမျး နှဈမျိုးရှိသညျ။
၁။ ဆငျခွငျမှု အဓိကဝါဒ - ၎င်းငျးကို အသုံးပွုခွငျးက လူများကို အံ့အားသင့်စပွေီး၊ ထူးထူး ဆနျးဆနျးဘာသာရေးလမျးကွောငျးသို့ ပို့ဆောငျသညျ။
၂။ သမ်မာကမျြးစာ - ယခုခရဈယာနျအသငျးတော်သညျ ဘုရားသခငျသညျ သူ့ကိုယျသူ သမ်မာကမျြးစာ၊ ယရေှုခရဈတော်အားဖွင့် ထငျရှားသညျဟု ယုံကွညျသညျ။ မေးခှနျးက ကျွနျုပျတို့ထငျသည့်အရာမဟုတျပါ၊ သားတော်ယရေှုခရဈအားဖွင့် ဘုရားသခငျမညျသို့ ပွောခဲ့သလဲ? ဖွဈသညျ။
၄။ တပါးတမျိုးတို့သညျ ပျောကျဆုံးသောသူတှေလား?
“ငါတို့အခုဒီမှာလုပျနကွေတာက ဘာသာရေးဆိုငျရာ ဆှေးနှေးငွငျးခုံမှု တှကေိုဖွရေှငျး တာထကျအများကွီးပိုအရေးကွီးတယျ”ဟုပွောပါ။
“အဲဒါကကောငျးတဲ့မေးခှနျးဖွဈတယျ၊ ဒါပမေယ့် အာဖရိကမှ မယုံကွညျသူများကို ဘုရားသခငျလကျထဲမှာ ငါတို့ပို့ဆောငျနိုငျဖို့ယုံကွညျပါတယျ”ဟု သငျပွောနိုငျသညျ။ ယနေ့ သငျထာဝရအသကျပိုငျဆိုငျတယျဆိုတာ သခေျာစခေငျြပါသညျ။ နောကျပိုငျး ဧဝံဂလေိ တရားမကွားဖူးသူများကို ကျွနျုပျတို့မွငျတှေ့နိုငျပါသညျ။ သို့သော် မေးခှနျးတဈခုက တခါမျှထို ဧဝံဂလေိတရားကို မကွားဖူးသည့်လူမျိုးများကို ဘုရားသခငျသညျ ငရဲသို့ပို့ဆောငျမလား?
သမ်မာကမျြးစာတှငျ ခရဈတော်သညျ စီရငျခွငျးခံပွီးသားလူတို့ကို နောကျထပျစီရငျရနျ ကွှလာ ခွငျးမဟုတျဟု ဆိုသညျ။ လူသားများသညျ သူတို့၏အပွဈတဈခုကွောင့်သာ စီရီ ခွငျးခံသညျ။
၅။ သပွေီးနောကျ နောငျဘဝကို မယုံကွညျပါ။
(၁) ပလတေို - ပလတေိုက အရသာရှိသောအသီး၏ အပငျတဈပငျမဖွဈလာခငျ မျို့စေ့ သညျ မွထေဲသို့ အဦးဆုံးအစိပျစိပျအမှာမှာ ဖွဈရမညျ။ အခွားကမ်ဘာနှင့် အခွား ဘဝ မကူးပွောငျးမီ လူ့ခန်ဓာကိုယျသညျ သရေမညျဟု ပလတေိုကောကျခကျြခခြဲ့သညျ။ ခရဈတော်နှင့်တမနျတော်ရှငျပေါလု မတိုငျမီ ပလတေိုသညျ ၄ ရာစုတှငျ အသကျရှငျ သညျ။ သို့သော် သူသညျ ခရဈတော်နှင့်ရှငျပေါလု ၁ ကော ၁၅း၃၅-၃၆၊ ရှငျယော ဟနျ ၁၂း၂၄ တှငျ ရညျညှနျးပွောဆိုသည့် လူ့ဘဝအသကျတာ နှင့်ပါတျသတျသော တူ ညီသည့်အရာကို သှနျသငျခဲ့သညျ။
(၂) အတှေးအခေါ်ပညာရှငျ ဧမာနှေလကနျက လူသားအားလုံးသညျ အမှားအမှနျ၊ ကိုယျကငြ့်တရား ဆိုငျရာတာဝနျဝတ်တရားများနှင့် ပတျသကျ၍ စိုးရိမျပူပနျကွောငျးပွော ကွားခဲ့သညျ။ နောကျပွီးသူက “တရားမျှတမှုမလှှမျးမိုးနိုငျလျှငျဘာကွောင့်မှနျတာလဲ? တနညျး အားဖွင့် သူကတာဝနျ ဝတ်တရားတဈခုအဓိပ်ပာယျရှိဖို့ တရားမျှတမှုရှိရမညျ၊ တရားမျှတမှုမရှိဘူးဆိုပါက ဘာကွောင့်မှနျ ရမညျနညျးဟုသူကရှငျးပွခဲ့သညျ။ ဒီဘ၀ မှာ တရားမျှတမှုမလှှမျးမိုးနိုငျလျှငျ တရားမျှတမှု လှှမျးမိုးနိုငျသညျ့ နေရာတဈတော့ ရှိရမညျ။ တနညျးအားဖွငျ့ ကနျဆိုတာလိုသညျမှာ တရားမှျ တမှုသညျ သေပွီးနောကျ ဘဝကို တောငျးဆိုသညျ။ ဤအရာက ဟေဗွဲ ၉း၂၇ ၌ ဖော်ပွထားသကဲ့သို့ ဖွဈ သညျ။
ထို့ကွောင့်ဧမာနှေလကနျအတှကျ လကျတှေ့ကငြ့်ဝတျသညျ သပွေီးနောကျဘဝနှင့် သမ်မာကမျြးစာ ၏ ဘုရားသခငျကဲ့သို့သော တရားသူကွီးတဈ ဦးလိုအပျသညျ။
(၃) အိုငျးစတိုငျးမှထုတျပွနျသော အပူစှမျးအငျသိပ်ပံဘာသာရပျ၏ပထမနိယာမ။ ၎င်းငျးသညျ စှမျးအငျနှင့်အရာဝတ်တုများကို ဖနျတီး၍ မဖကျြဆီးနိုငျကွောငျး ဖော်ပွထားသညျ။ အကယျ၍ လူသားသညျမတညျရှိတော့ပါက သူသညျ စကွာဝဌာတှငျတဈခုတညျး သောအရာဖွဈသညျ။ ၁ကော ၁၅း၄၉-၅၂တှငျ လူသား၏သပွေီးနောကျဘဝကို ဖော်ပွထားသညျ။ အိုငျးစတိုငျးကလညျး ဘုရားမဲ့ဝါဒီတဈယောကျမဟုတျခဲ့ပါ။
(၄) သေဆုံးပွီးသားလူတို့၏ နောကျဆုံးစကားများ
ဘုရားမဲ့ဝါဒီဂိဗှနျသညျ သူ၏သခေါနီးတှငျ “အားလုံးမှောငျမိုကျနသေညျ” ဟု ကွှေးကွော်ခဲ့သညျ။ အခွားဘုရားမဲ့ဝါဒီ အာဒံလညျး သခေါနီးတှငျ “မကောငျးဆိုးဝါး များသညျ အခနျးထဲမှာ ကျွနျတော့်ကို ဆှဲခေါ်နတေယျ”ဟု အော်ဟဈသညျ။
ခရဈယာနျ ဓမ်မသီခငျြးရေးစပျသူ Toplady သညျ အားလုံးအလငျး၊ အလငျး ဖွဈတယျ”ဟု ကွှေးကွော်သညျ။ Everett က သူမသဆေုံးမီ “ဘုနျးတနျခိုး၊ ဘုနျး တနျခိုး၊ ဘနျးတနျခိုး”ဟုပွောခဲ့သညျ။ ထောငျနှင့်ချီသောလူများသညျ လာမည့်အရာ၊ သူတို့ဖွတျသနျးသှားလာမယျ့ဘဝကို ကွညျ့ရှုမွငျတှေ့သညျ။
၆။ ပွနျလညျအသကျသှငျးသညျ့လူသားများ၏ အမှတျရခွငျး
သိပ်ပံပညာရှငျများ လေ့လာတှေ့ရှိခကျြများအရ လူ့ဘဝသညျသင်ျချိုငျးထကျ ကျော်လှနျ၍သှားသညျ ဟူသောအခကျြသညျ သူတို့ကို ယုံကွညျစခေဲ့သညျ့အပွငျ ထိုအရာသညျ သူတို့၏သိပ်ပံနညျးကကြျ ကမ်ဘာ ကိုဖွညျ့ဖျားခွငျးဖွဈသညျ။ တချို့နာမညျကျော်ကွားသော သိပ်ပံပညာရှငျသညျ ငရဲ(သို့)ကောငျးကငျဘုံ အတှကျ ကွုံတငျပွငျဆငျခဲ့ပွီးသညျကို ကျွနျတော်ကွားဖူးခဲ့ပါသညျ။ ဤအတှေ့အကွုံများက ဖွဆေိုရနျ မေးခှနျးအချို့ကနျြ ရှိသညျ။ သို့သော် သူတို့ကစိတျဝငျစားစရာကောငျးသော သကျသခေံခကျြရှိပါသညျ။
Elizabeth Kubler-Ross က ခရဈယာနျတဈယောကျမဟုတျပါ၊ သို့သော် သူမက “သဆေုံးပွီး နောကျဘဝရှိတယျ၊ ဒီအရာက မှနျကနျတဲ့အထောကျအထားဖွဈတယျ” ဟု ရေးထားခဲ့သညျ။ ဒေါကျတာ Kubler-Ross က “သဆေုံးခါနီး အတှေ့အကွုံများသညျ သိပ်ပံနညျးကကြျ မှနျကနျစှာ အတညျပွုသညျ”ဟု ဆိုခဲ့သညျ။ နောကျပွီးသူမက “ဒီအကွောငျးအရာကို ပွောဖို့ ကျွနျမတို့တော်တော်ကွောကျပါတယျ”ဟု ပွောခဲ့ သညျ။
ဒေါကျတာ Raymond Moody က “ သခေါနီးပါးသော လူနာ၏အော်ဟဈအသံကို ဆရာဝနျ တဈဦးပွောပွ သညျ။” ထိုလူနာကို အများကသတငျးပို့ထားကွ၍ အသကျကယျအခနျးရှိ ဆရာဝနျများအားလုံးက သတိ ထားစောငျ့ကွညျ့နကွေသညျ။ ဤအရာကို လူအနညျးငယျတှငျသာ မဟုတျဘဲ၊ တဈကမ်ဘာလုံးမှ လူပေါငျး ငါးရာကျော်တှငျ ဖွဈပကျြကွုံတှေ့သညျ။ ဒီလူတှအေားလုံးက သူတို့သညျ ဘာသာရေးကိုငျးရှိုငျးသော သူတဈ ယောကျအနဖွေငျ့ တှေ့သညျဟု အစီရငျခံကွသညျ။ အထူးသဖွင့်ဘုရားမဲ့ဝါဒီများဖွဈသညျ။
ဒေါကျတာ Kubler-Ross က “သပွေီးနောငျတမလှနျဘဝကို ယုံကွညျတယျလို့ ငါပွောဖူးတယျ။’ ဒါပမေယျ့ အခုငါသိပွီ” ဟု ရာကျော်ဆေးဆရာဝနျများကို ပွောခဲ့သညျ။
ထို့နောကျ ဆေးပါရဂူများနှငျ့ပညာရှငျများက မကျတပျရပျပွီး သူမကို လကျခုတျဩဘာပေးကွသညျ။
၇။ လူသဆေုံးပွီး သံသရာလညျခွငျး အယူအဆက မညျသို့နညျး?
ဤအရာက ဟိန်ဒူနှငျ့ဗုဒဘာသာတို့၏ယုံကွညျခကျြဖွဈသညျ။ ခရဈယာနျဘာသာ၏ယုံကွညျမှု မဟုတျပါ! သမ်မာကမျြးစာက “လူသညျ တခါတညျးသ၍ေ ထိုနောကျမှ တရားစီရငျတော်မူ ခွငျးကိုခံရသကဲ့သို့၊” (ဟဗွေဲ ၉း၂၇)။
ထိုယုံကွညျခကျြများသညျ ခရဈတော်၏ကိုယျစားအသခေံနှငျ့ သူ၏ဖွောငျ့မတျခွငျးတရားကို လျှဈလျှူရှု သညျ။ ခရဈတော်သညျ သူ၏အသခေံပေးခဲ့ခွငျးဖွငျ့ လူသားများအပွဈများကို သူကိုယျတိုငျ သယျဆောငျ သှားပေးခဲ့သညျ။ သူ့ကို ကျွနျတော်တို့ ယုံကွညျကိုးစားသောအခါ ကားတိုငျပေါ်သှနျးလောငျးသညျ့ သူ၏ အသှေးအားဖွငျ့ ကျွနျတော်တို့သညျ သနျ့ရှငျးသူများဖွဈသညျ။
၈။ ငရဲသညျ အစဈအမှနျမဟုတျပါ။
တခါတလေ ကျွနျတော်တို့က “အဲဒီအရာက စိတျပညာရဲ့အမှနျတရားဖွဈတယျဆိုတာ ခငျဗျားသိတယျ၊ အဲဒီအမှနျတရားက ကျွနျတော်တို့အသနျးအထနျ ငွငျးပယျတဲ့ ကျွနျတော်တို့ရဲ့ ကွောကျစိတျတရားဖွဈတယျ”ဟု ပွောနိုငျသညျ။ ငရဲပွညျကိုသငျမယုံကွညျရခွငျးရဲ့အကွောငျးအရငျးက သပွေီးနောကျ ခငျဗျားသှားရမယျ့နရော တဈနရောရှိလို့ စိတျထဲမှာ ကွောကျစိတျဝငျတယျဆိုရငျ ထိုအရာအတှကျ ငါစိုးရိမျပေးတယျ။” ခကွာ ခဏ ဖွလေေ့ရှိတဲ့ အဖွကေ “သငျမှနျမယျဆိုတာ ငါထငျတယျ။”
သို့သော် “ငရဲအကွောငျးသငျ့ကို မယုံစခေငျြဘူး၊ ဧဝံဂလေိတရားကွောငျ့ သငျငရဲမသှားဘူးဆိုတာ သငျသိနိုငျတယျ၊ ငရဲကို ငါယုံတယျ၊ ဒါပမေယျ့ ဘုရားသခငျရဲ့ကတိကွောငျ့ ငါငရဲမသှားဘူးဆိုတာ ငါသိတယျ။ ငါထိုကဲ့သို့သောနရောကို မယုံသောကွောင့် ငါငရဲမသှားဘူးဆိုတာ ငါသိတယျ။” ဟု သငျ့ရဲ့အမွော်အမွငျကို သငျပွောနိုငျသညျ။
၉။ ဤလောကတှငျ ကျွပျတို့၏ငရဲရှိသညျ။
သငျတဈစိပျတဈပိုငျး မှနျပါသညျ။ မူးယဈဆေးဝါးစှဲ၍ လောက၌ငရဲလိုခံစားနသေူ၊ အရကျစှဲ၍ အရကျ၏ ကျွနျဖွဈနသေူတဈချို့ ကျွနျတော်သိပါသညျ။
သငျးအုပျဆရာ Mark Buckley က သူသညျမူးယဈဆေးဝါးသုံးစှဲ၍ စိတျကမျြးမာရေးဆေးရုံမှ လှတျမွောကျလာပုံကို ပွောပွသညျ။ ယရေှုခရဈတော်ကို ယုံကွညျခွငျးအားဖွငျ့ ထိုနရောမှ လှတျမွောကျခဲ့ သညျ။ ခရဈတော်က သငျးအုပျဆရာ Rev. Buckley ကို မူးယဈဆေးဝါးသုံးစှဲရာ၊ ဤလောကငရဲမှ ကယျတငျပေးခဲ့သညျ။ မိတျဆှလေညျးပဲ သငျးအုပျဆရာကဲ့သို့ အသကျတာပွောငျးလဲရနျ ခရဈတော်ကို ယုံကွညျလကျခံနိုငျပါသညျ။ မာ့ချရဲ့စာအုပျကို အမဇေုနျမှာ မှာယူနိုငျပါသညျ။ သူရေးထားသညျ့ “အမှောငျ ထဲမှအလငျး ကျွနျုပျ၏ခရီး” ဖွဈသညျ။ စာမကျြနှာအနညျးငယျကို ဖတျပါက၊ တဈအုပျလုံးဖတျခငျြပါလိမျ့မညျ။ ကျွနျတော်နှဈကွိမျတိုငျတိုငျ ဖတျခဲ့ပွီးပါပွီ။
ကျွနျတော်တို့က ဥပုဒျစောငျ့သမားများမဟုတျပါ၊ သို့သော် သငျးအုပျဆရာ Buckley ပွောကွား ခကျြကို သဘောတူပါသညျ။ သူက
ကျွနျုပျတို့သညျ ဘုရားသခငျကိုယုံကွညျပွီးကိုးစားသညျ့အခါ သူသညျ ကျွနျုပျတို့အား ထိုးထှငျးသိမွငျမှုနှင့်နားလညျမှုကိုပေးနိုငျသညျ။ ကျွနျတော် ဝိညာဉျပိုငျး ဥပဒရေေးရာအတှကျ ထောကျခံသညျမဟုတျပါ။ သငျ ကနျြးကနျြး မာမာ အနားယူနနေိုငျဖို့ သငျ့ကို တိုကျတှနျးရခွငျးဖွဈသညျ။ (Mark Buckley ရေးသားသညျ့ အမှောငျမှအလငျး ကျွနျုပျ၏လမျးခရီး)။
(၁၇၀၇-၁၇၈၈ခုနှဈ ချာလကျ(ဈ)ဝီစလီသီကုံးသော နှုတျတဈထောငျဖွငျ့ သီဆိုကျူး)